Persistent Information Exchange စျေး - အွန်လိုင်း PIE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Persistent Information Exchange (PIE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Persistent Information Exchange (PIE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Persistent Information Exchange ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $27 051.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Persistent Information Exchange တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Persistent Information Exchange များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Persistent Information ExchangePIE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0439Persistent Information ExchangePIE သို့ ယူရိုEUR€0.0371Persistent Information ExchangePIE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0335Persistent Information ExchangePIE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0399Persistent Information ExchangePIE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.39Persistent Information ExchangePIE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.276Persistent Information ExchangePIE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.968Persistent Information ExchangePIE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.163Persistent Information ExchangePIE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0581Persistent Information ExchangePIE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0612Persistent Information ExchangePIE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.981Persistent Information ExchangePIE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.34Persistent Information ExchangePIE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.239Persistent Information ExchangePIE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.28Persistent Information ExchangePIE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.7.39Persistent Information ExchangePIE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0602Persistent Information ExchangePIE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0668Persistent Information ExchangePIE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.36Persistent Information ExchangePIE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.305Persistent Information ExchangePIE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.69Persistent Information ExchangePIE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩51.98Persistent Information ExchangePIE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦16.87Persistent Information ExchangePIE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.22Persistent Information ExchangePIE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.21
Persistent Information ExchangePIE သို့ BitcoinBTC0.000004 Persistent Information ExchangePIE သို့ EthereumETH0.000114 Persistent Information ExchangePIE သို့ LitecoinLTC0.000807 Persistent Information ExchangePIE သို့ DigitalCashDASH0.000484 Persistent Information ExchangePIE သို့ MoneroXMR0.000493 Persistent Information ExchangePIE သို့ NxtNXT3.42 Persistent Information ExchangePIE သို့ Ethereum ClassicETC0.00647 Persistent Information ExchangePIE သို့ DogecoinDOGE12.66 Persistent Information ExchangePIE သို့ ZCashZEC0.000533 Persistent Information ExchangePIE သို့ BitsharesBTS1.35 Persistent Information ExchangePIE သို့ DigiByteDGB1.4 Persistent Information ExchangePIE သို့ RippleXRP0.156 Persistent Information ExchangePIE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00151 Persistent Information ExchangePIE သို့ PeerCoinPPC0.146 Persistent Information ExchangePIE သို့ CraigsCoinCRAIG20 Persistent Information ExchangePIE သို့ BitstakeXBS1.87 Persistent Information ExchangePIE သို့ PayCoinXPY0.766 Persistent Information ExchangePIE သို့ ProsperCoinPRC5.51 Persistent Information ExchangePIE သို့ YbCoinYBC0.00002 Persistent Information ExchangePIE သို့ DarkKushDANK14.08 Persistent Information ExchangePIE သို့ GiveCoinGIVE95.05 Persistent Information ExchangePIE သို့ KoboCoinKOBO10 Persistent Information ExchangePIE သို့ DarkTokenDT0.0404 Persistent Information ExchangePIE သို့ CETUS CoinCETI126.75